12ka Alaab ee ugu Sareeya Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada 2019 | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/12-ka Aal ee ugu Sarreysa ee Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada 2019
Suuqgeynta warbaahinta bulshada ayaa ah goob iska soo horjeeda. Waxay u egtahay in qof kastaa samayn karo: wax ku dheji (wax kasta!) Baraha bulshada, raadi waxa jira, dadka la hadal, ka buuxi xisaabta Instagram ee shirkaddaada xubnaha kooxdaada sawir-qaadista. Waxay u egtahay hawl ilmo kasta oo ka mid ah waayaha warbaahinta bulshada ee maanta.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto in suuq-geynta warbaahinta bulshada ee ROI ay koraan, tani maaha habka aad ku socon karto.
Waa laga yaabaa fiiri sahlan, laakiin waa wax aan macquul aheyn in la sameeyo suuq-geynta warbaahinta bulshada mid waxtar leh iyada oo aan la helin ilo dhaqaale, dad karti leh, iyo qalabka saxda ah ee shaqada. Qoraalkani wuxuu diiradda saari doonaa qalabka suuq-geynta warbaahinta bulshada. Aaladaha suuq-geynta warbaahinta bulshada ee aan maanta ka hadli doono ayaa soo muuqda sababtoo ah waa isticmaale-saaxiibtinimo oo sii wanaajiya iyaga oo ka jawaabaya isbeddelada iyo isbeddellada warbaahinta bulshada. Waxaan u kala qaybiyay saddex kooxood iyadoo loo eegayo hawlaha ugu muhiimsan ee suuq-geynta warbaahinta bulshada ee u baahan automation:
Maamulka suuqgeynta warbaahinta bulshada
Xayeysiinta warbaahinta bulshada
Halkan waxaa ah liis horudhac degdeg ah oo ah dhammaan 12-ka qalab ee suuq-geynta warbaahinta bulshada:
…laakin sii wad wax akhriska si aad wax badan uga barato sida qalabkani u shaqeeyo, inta ay ku kacayaan iyo in ka badan!
Qalabka suuq-geynta warbaahinta bulshada: Jadwalka & socodka shaqada
Qalabkan lagu maareeyo warbaahinta bulshada ayaa ah kuwa kaa caawinaya inaad maareyso habsami u socodka shaqada ee warbaahinta bulshadu u baahan tahay (haa, waa magaca). Waxay ka dhigaan geeddi-socodka mid sahlan, habaysan, walaac yar, iyo, sidaas darteed, waxtar badan. Waa kuwan dhowr ka mid ah kuwa aan jeclahay.
Markaa waxaad heshay qoraaladaada warbaahinta bulshada oo la qorsheeyay waxaana laga yaabaa inaad xitaa ka gudubtay hawshii akhriska qoraalka. Waa maxay tallabada xigta? Si otomaatig ah loogu sameeyo wax kasta oo imanaya ka hor iyo ka dib (iyo inta u dhaxaysa). Taasi waa waxa IFTTT loogu talagalay. Magaca aaladdan otomaatiggu waxay u taagan tahay Haddii Tani, Markaa Taasi. Waxa ay isku xidhaysaa dhammaan noocyada abka iyo adeegyada si ay u habeeyaan hawlaha tallaabooyin badan leh si kasta oo aad rabto. Tusaale ahaan, haddii aad daabacdo blog, waxaad abuuri kartaa IFTTT "recipe" kaas oo arki doona boostada cusub oo abuuri doona tweet iyo sidoo kale boostada Instagram oo ku saabsan.
Haddii ay jirto hawl ku jirta socodka shaqada suuq-geynta ee warbaahinta bulshada oo aad had iyo jeer ilowdo in kasta oo dhammaan qoraallada ka dambeeya, isku day IFTTT.
Buffer waa aalad jadwal caan ah oo u ogalaata suuqlayda in ay jadwal u sameeyaan qoraalada warbaahinta bulshada ee kala duwan. Waxaad ku dhejin kartaa qoraal kasta goob kasta ama waxaad ku daabaci kartaa mid la mid ah meel kasta.
Waxaad isticmaali kartaa kordhinta Chrome ka Buffer si aad ugu darto wax kasta oo aad ka hesho Shabakadda safka Buffer. Tani waxay ku daraysaa xoogaa madadaalo iyo hal-abuur ah dhammaan habka isku-darka nuxurka iyo wadaagga, sababtoo ah hal mar uma baahnid inaad sii qorsheysato waxa aad la wadaagto. Haddana qoraalladaada wali waa la wadaagi doonaa wakhtiga ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Waxaad sidoo kale la socon kartaa xiriiriyeyaasha si aad u aragto nuxurka ugu caansan akhristayaashaada.
Qiimaha: freemium; qorshayaasha la bixiyay laga bilaabo $15/bishii
Durba ma heshay Buffer? Si aad shaqadaada u fududayso xitaa, ie, si aad meesha uga saarto qaybta aad tahay qofka raadinaya waxyaabo qiimo leh oo aad la wadaagto, bilow isticmaalka Quuu. Kani waa aalad suuqgeyneed oo warbaahinta bulshada ah kaas oo kuu qiimeeya waxa ku jira: waxay ku qaadanaysaa gacanta-ku-xun, had iyo jeer nuxurka khusaysa, oo waxay ku daraysaa safka Buffer. Tani waxay meesha ka saaraysaa wax kasta oo dhib ah oo ku saabsan samaynta iyo wadaagista wax kasta oo aan ahayn alaabtaada ugu raba inaad wadaagto (tusaale ahaan, qoraaladaada baloogga iyo waxyaalaha xayaysiinta).
Qiimaha: qorshuhu waxa uu ka bilaabmaa $15/bishii
MeetEdgar waa aalad kale oo jadwalka warbaahinta bulshada taas oo u taagan hal sabab: waxay kuu ogolaaneysaa inaad dib u warshadeyso qoraaladii hore. Tani way ka muhiimsan tahay sida ay u muuqato: Content, xitaa wanaagsan iyo waxyaabaha caanka ah, waa la ilaaway oo laga tagay. Dib-u-warshadaynta nuxurkaas hore si ay mar kale u hesho aragtiyo waa midho-jiidasho-hoose, iyo marar badan fursad la lumiyo.
MeetEdgar, waxaad u habaysaa qoraalada qayb ahaan, waxaad jadwal u dhigtaa nuxurka qayb ahaan, ka dibna, mar kasta oo qalabku marayo jadwalkaaga jadwalsan, wuxuu si toos ah u soo dhejin doonaa nuxurkii hore ee qayb kasta si uu mar kale dareenka u helo.
Qiimaha: $ 49 / mo
Qalabka suuq-geynta warbaahinta bulshada: Kormeer
Suuqgeynta warbaahinta bulshada ee dabiiciga ah waxay u qaybsan tahay laba hab. Mid waxa uu ku saabsan yahay waxa adiga iyo summadaada ka kooban. Waa waxa aad abuurto, waxa aad isu gayso oo aad la wadaagto dhagaystayaashaada, iyo nuxurka xayaysiinta. Aaladaha suuq-geynta warbaahinta bulshada ee otomaatig u sameeya oo hagaajiya qaybtan shaqada ayaa kor looga hadlay. Qaybta labaad ee suuq-geynta warbaahinta bulshada waxay ka timaadaa daawadayaasha. Waa sheegista summadaada onlaynka, faallooyinka, su'aalaha, bogaadinta iyo cabashooyinka adiga laguu jeediyo.
Iyadoo dhajinta laga yaabo inay muhiim u tahay kordhinta wacyiga sumadda, la socoshada waxa ay dadku kaa sheegaan iyo ka jawaabista ku haboon sidoo kale waa muhiim. Waa wax aad u macquul ah in aad gacanta ku hesho dhammaan xusaha astaanta warbaahinta bulshada, maadaama xitaa goobaha warbaahinta bulshada dadku aysan had iyo jeer calaamadin astaanta. Taasi waa sababta aaladaha la socodka warbaahinta bulshada ay u jiraan: si isgaarsiinta dhageystayaasha khadka looga dhigo mid dhamaystiran. Waa kuwan qaar ka mid ah kuwa muuqda:
Awario waa aalad dhegeysi bulsho oo loo sameeyay solopreneurs iyo ganacsiyada yaryar. Uma baahna miisaaniyad weyn, laakiin waxay dabooshaa dhammaan sifooyinka dhegeysiga warbaahinta bulshada ee waaweyn: waxay helaysaa sheegista astaantaada ama erey kasta oo kale oo muhiim ah dhammaan goobaha warbaahinta bulshada ee waaweyn, oo ay ku jiraan golayaasha saameynta leh sida Reddit; wuxuu u kala jejebiyaa kuwa togan, taban, iyo kuwo dhexdhexaad ah; wuxuu ku tusayaa liiska saameeyayaasha; waxayna ku siinaysaa warbixino leh dhammaan xogta qorayaasha sheegaya astaantaada.
Qiimaha: wuxuu ka bilaabmaa $29/bishii
Mention waxay bixisaa la socodka warbaahinta bulshada ee waqtiga-dhabta ah, waxaadna dejin kartaa digniinaha sumaddaada, tartamayaashaada, iyo warshadahaaga. Qalabkan, waxaad ku arki kartaa oo aad uga jawaabi kartaa mid kasta oo jecel, ku dhufo, ama xuso (ah, arag waxa ay halkaas ku sameeyeen?) Isla abka. Waxa kale oo aad u habayn kartaa sheegidda muhiimad ama muhiimad, oo xitaa waxaad dejin kartaa filtarrada, oo ay ku jiraan isha ama luqadda.
Xusiddu waxay kaloo bixisaa laba ikhtiyaar oo ku habboon kuwa kala duwan ee u baahan la socodka warbaahinta bulshada: ganacsiyada yaryar waxay diiradda saaraan summaddooda iyo wakaaladaha ka shaqeeya magaca macaamiishooda.
3. Saacadaha Brand
Haddii miisaaniyadaadu aad u weyn tahay, markaa Brandwatch ayaa laga yaabaa inuu kuu noqdo qalabkaaga. Xogta falanqaynta Brandwatch waa mid muuqaal sare leh: ku habboon in la muujiyo macnaha suuq-geynta warbaahinta bulshada ee macaamiisha, haddii aad tahay wakaalad.
Muuqaal kale oo ka dhigaya Brandwatch inuu istaago waa Signals. Waxaad haysataa fursad aad ku dejiso digniin mar kasta oo kelmad muhiim ah ay xusaan qorayaasha aad doorato. Calaamaduhu waxay ka digayaan isbeddellada la taaban karo ee ku yimaadda xogta, sida tirada ugu sarreysa ee lama filaanka ah ama kororka sheegidda taban.
Qiimaha: wuxuu ka bilaabmaa $ 800 / mo
Talkwalker waa aalad kale oo suuqgeyneed oo heer ganacsi ah oo warbaahinta bulshada ah kaas oo shaki la'aan ah midka ugu awooda badan suuqa. Waxay bixisaa filtarrada, filtarrada hoose, iyo daboolida madal aad u tiro badan. Ma aha oo kaliya inay daboolaan warbaahinta bulshada, goobaha wararka, blogyada iyo golayaasha, laakiin sidoo kale waxay daboolaan baahinta, TV-ga, iyo daabacaadda. Xogta la heli karo waa mid aan dhammaad lahayn. Waxay isku daraysaa macluumaadka Google Analytics iyo warbaahinta bulshada, falanqaynta dareenka iyo aqoonsiga sawirka si ay kuu tuso warbixinta ugu saxsan ee dhinac kasta oo dhagaystayaasha ah.
Talkwalker waxaa loogu talagalay kooxaha suuqleyda iyo faa'iidooyinka PR, waxayna ka dhigtaa ka shaqaynta kooxaha mid fudud. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad maamusho habsami u socodka shaqada ee waax oo aad si fudud ula wadaagto xogta waaxyaha.
Qiimaha: wuxuu ka bilaabmaa $9,600/sanadkii
Socialinsider waa qalab falanqayn iyo bar-tilmaameed u ah Facebook, Instagram, Twitter, iyo Youtube.
Qalabkan, waxaad ku arki kartaa halka aad ka soo horjeedo tartamayaasha ugu sarreeya, waxaad ku wanaajisaa istaraatiijiyada warbaahinta bulshada ee macaamiishaada oo leh falanqayn horumarsan iyo bartilmaameed tartan, la soco KPI-yada warbaahinta bulshada, oo aad la wadaagto warbixinnada summadaysan macaamiishaada. Ku dar summadaada iyo midabka summada si aad u siiso taabasho shakhsiyeed oo dheeraad ah.
Isticmaalka Socialinsider, waxaad kaydin doontaa wakhtiga oo aad ku qancin doontaa macaamiisha xogta aanay hore u arkin.
Qiimaha: Wuxuu ka bilaabmaa $ 59 / bishii ama hel tijaabo 7 maalmood ah oo bilaash ah.
Qalabka suuq-geynta warbaahinta bulshada: Xayeysiis lacag ah
Suuqgeynta warbaahinta bulshada waa mid dhib badan. Mararka qaarkood waxay u egtahay in wax walba lagu gaari karo si dabiici ah oo bilaash ah, ilaa inta dadaalkaagu uu yahay mid hal abuur leh oo dhab ah. Nasiib darro, tani waa dhif kiiska, waxayna noqotaa mid aad u yar oo aan caadi ahayn si loo gaaro guusha suuq-geynta warbaahinta bulshada iyada oo aan wax miisaaniyad ah lagu xayeysiin. Tani waa gaar ahaan kiiska Facebook. Si kastaba ha noqotee, sida soo jiidashada leh sida Facebook ay u sameyso xayeysiis muuqaal ah, way adag tahay in la sameeyo haddii aadan haysan qalab sax ah. Haddaba waa kuwan kuwa la doortay:
In kasta oo Facebook ay bixiso xoogaa falanqayn ah oo ku saabsan xayeysiisyada, badanaa way adag tahay in la sheego in xayeysiisyadaadu ay u qalmaan lacagta, iyo haddii kale, waxa ay tahay in la hagaajiyo si ay u noqdaan kuwo waxtar leh. WordStream's Facebook Ads Grader ayaa ku ogaysiinaya taas: waxay ku siinaysaa qiimayn bilaasha oo dhamaystiran waxqabadka xayaysiiskaaga Facebook.
Aaladda suuq-geynta warbaahinta bulshada ee ku saleysan warbixinta ayaa soo saartay kooban tafatiran ee meelaha aad ku guuleysaneyso oo aad dib uga dhaceyso. Falanqaynta waxaa ku jira qiyaaso ku tusinaya inta ay le'eg yihiin Tusayaasha Waxqabadka Muhiimka ah ee ku kala duwan yihiin cidda aad u xayaysiinayso; sida xayaysiisyadaada ugu waxqabadka xun uguna barbardhigaan kuwa kula tartamaya; haddii aad lacag badan bixinayso; haddii aad beegsanayso daawadayaasha saxda ah; iwm. Waxa kale oo ay muujinaysaa haddii ololahaaga, xayaysiisyadaadu, iyo xayaysiisyadaadu ay u hoggaansamaan heerarka warshadaha ee Facebook. Asal ahaan, Facebook Xayeysiisyada Grader waa habka ugu fudud ee lagu arki karo haddii aad si fiican uga faa'iidaysanayso miisaaniyadaada iyo sida aad u horumarin karto.
Qwaya waa aalad suuqgeyn bulsho si ay gacan uga geysato abuurista iyo maareynta xayaysiisyada Facebook iyo Instagram. Waa macno in la iibsado ka hor intaadan xitaa bilaabin inaad lacag ku maalgeliso Xayeysiiska Facebook. Qwaya wuxuu kuu ogolaanayaa inaad jadwal u sameyso xayeysiisyada, waxay bixisaa isdhexgalka falanqaynta iyo iskaashiga kooxda. Tan ugu muhiimsan, waxay kuu ogolaanaysaa inaad tijaabiso xayeysiisyadaada A/B.
Qof kasta oo suuqgeyn ku jira wuu ogyahay in tijaabnidu ay fure u tahay in la helo farriinta saxda ah ee dhagaystayaashaada. Xayeysiiska warbaahinta bulshada maaha mid ka reeban. Qwaya, waxaad tijaabin kartaa doorsoome kasta oo aad rabto inaad hubiso inaadan khasaarin lacagtaada oo aad hesho natiijada ugu macquulsan.
Qiimaha: wuxuu ka bilaabmaa $149/bishii
3. Dhageyste qumman
Dhageyste qumman waa aalad dib-u-eegis oo loo isticmaali karo xayeysiinta Facebook. Marka aad ka gudubto naqshadda cad ee duugowday (ka xumahay) oo aad tijaabiso qalabka, waxaa laga yaabaa inaad u aragto mid waxtar u leh ganacsigaaga.
Dib u habeyntu waa qayb weyn oo ka mid ah xeelad kasta oo xayeysiis ah - ama ugu yaraan waa inay noqotaa. Dhageystayaasha saxda ah ayaa fududeeya habka waxayna kaa caawinayaan inaad dejiso olole oo aad aragto natiijooyinka. Waxay ku siinaysaa macluumaadka aragtiyaha loo adeegay, gujisyada dib, beddelka, iyo qiimaha. Qalabka waxaa loo isticmaali karaa Webka iyo Mobile-ka iyo sidoo kale Facebook.
Qiimaha: lagu dalaco CPM (faahfaahin dheeraad ah halkan)
Alina Gorbatch waa khabiir suuqgeyneed oo khibrad leh iyo qoraa wax ka qora Awario. Raac @BlondeAlina Twitterka.